Circuit Board Assembly - SHENZHEN KAISHENG PCB CO., LTD
Metal isi PCB
Akwa Frequency PCB
Mgbakọ Turnkey PCB
Ndenye Turn PCB Assembly
Mgbakọ PCB Prototype
Mpịakọta PCB Assembly
Ike PCBA & Ọrụ Ndị Ọzọ
PCB nzukọ Ike
Mgbakọ Board Circuit
Companlọ ọrụ Mgbakọ Electronic
Mgbakọ SMT PCB
PCB ricgha Ma Assembly
Mbipụta Circuit Board Assembly
PCB Manufacturing Na Mgbakọ
Mgbakọ Circuit- Mgbakọ - PCBFuture
Keywords: nzukọ PCB, SMT PCB nzukọ, Ọrụ Turnkey, nzukọ ndị nlekọta sekit
PCBFuture main customers come from medium-sized manufacturers in the field of n'ji ngwá electronic, dijitalụ ngwaahịa, wireless telekomunikashions, ulo oru management na akpaaka, ọgwụ na ọgwụgwọ, wdg Anyị siri ike ahịa isi na-enye a siri ike nkwalite maka mmepe nke ụlọ ọrụ na-eme n'ọdịnihu.
Gịnị mere anyị ga-eji họrọ ije ozi mgbakọ sekit anyị?
1.Quick Tụgharịa prototype na uka mmepụta PCB
Anyị raara nye n'ichepụta 1-28layer ngwa ngwa, prototype na uka mmepụta nnukwu nkenke PCBs na ụkpụrụ nke "kacha mma, nke kacha ala ọnụahịa na ọsọ nnyefe oge"
2.Strong OEM n'ichepụta ikike
anyị n'ichepụta ụlọ ọrụ na-agụnye ọcha noo na anọ elu SMT ahịrị. Ndokwa anyị nwere ike iru mgbawa + 0.1MM na akụkụ sekit ndị agbakwunyere, nke pụtara na anyị nwere ike ijikwa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụdị eriri eletrik niile, dị ka SO, SOP, SOJ, TSOP, TSSOP, QFP na BGA. Ọzọkwa, anyị nwere ike inye 0201 mgbawa pụrụ isi chọta site-onu mmiri nzukọ na okokụre ngwaahịa n'ichepụta.
3.Fara iji melite ogo ngwaahịa
Anyị na-agba mbọ ka mma na PCBs. Ọrụ anyị agafeela ISO 9001: 2000 enyere akara, ngwaahịa anyị enwetakwa akara CE na RoHS. Na mgbakwunye, anyị na-etinye maka asambodo QS9000, SA8000.
4. Nọmalị 1 ~ 5 ụbọchị maka naanị PCB nzukọ; 10 ~ 16 ụbọchị maka turnkey PCB nzukọ.
Anyị nwere ike inye:
1.PCB ọkọnọ na okirikiri nhọrọ ukwuu
2. kompoo na-agbakwunye
Nyocha 3-ray AOI
6.Package na lọjistik & mgbe- ahịa ọrụ
7.from n'ichepụta nkà ihe ọmụma site na PCB nzukọ, mmiri sourcing, ọhụrụ ngwaahịa Okwu Mmalite, ka PCB ule, warranties ọnwụ sọ na idozi, na lọjistik.
Ihe ụfọdụ dị mkpa maka mgbakọ sekit e biri ebi:
Mpempe akwụkwọ sekit ebipụtara: Ọ bụ isi ihe achọrọ maka usoro mgbakọ.
Ntọala eletrikiiki: You chọrọ ngwa eletrọniki niile dịka transistors, diodes and resistors.
Ịgbado ọkụ ihe: The ihe onwunwe na-agụnye solder tapawa, solder mmanya na solder waya. Ichoro bọọlụ bọọlụ na solder. Flux bụ ihe ọzọ dị mkpa ire ere.
Ịgbado ọkụ akụrụngwa: Nke a na ihe onwunwe na-agụnye efe soldering igwe na soldering ojii. Alsokwesịrị mkpa ngwa SMT na THT niile dị mkpa.
Nnyocha na ule: Ihe nnwale dị mkpa maka ịlele arụmọrụ na ntụkwasị obi nke nzukọ ọgbakọ sekit.
Ebute Time nke PCB nzukọ:
Oge ndu dabere na iwu ahụ. Site na ihe onwunwe na ahụmịhe anyị, oge mgbakọ anyị na-adịkarị n'etiti awa 24 na izu 1. Oge ga-adịgasị iche dabere na mgbagwoju anya nkee biri ebi nzukọ sekit. Omenala aghụghọ nwere ike iwekwu oge.
Kemgbe ọtụtụ afọ, PCBFuture achikọtara a ọnụ ọgụgụ buru ibu nke PCB n'ichepụta, Production na debugging ahụmahụ, na ịdabere na ahụmahụ ndị a, na-enye isi na-eme nnyocha sayensị institutes na nnukwu na-ajụ-sized enterprise ahịa na a onye-nkwụsị imewe, ịgbado ọkụ, na debugging nke arụ ọrụ dị elu na ntụkwasị obi dị elu nke nwere ọtụtụ akwụkwọ bupute site na ihe atụ na batches Thisdị ọrụ a ka a na-eji n'ọtụtụ ọrụ dị iche iche dịka nkwukọrịta, aerospace na ụgbọelu, IT, ọgwụgwọ ahụike, gburugburu ebe obibi, ike eletrik, na nkenke ule ule.
Ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ jụọ ajụjụ, nweere onwe gị ịkpọtụrụ sales@pcbfuture.com , anyị ga-aza gị ASAP.
Leadingwa na-eduga biri ebi circuit iba n'ichepụta na nzukọ emeputa.
--- Bụrụ onye gị na ya pụrụ ịdabere na ya ---
Adreesị: RM4,16 / F HO KING COMM CTR 2-16 FAYUEN ST MONGKOK KLN HONGKONG